Ntughari KFX, ihe mgbakwunye Caliber maka Kindle | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ntughari KFX, ihe mgbakwunye Caliber maka Kindle
Ọtụtụ n'ime unu nwere Kindle eReader, eReader nwere ọtụtụ ọrụ maka ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ mana n'ezie ị gaghị eji ụlọ ahịa Amazon nweta akwụkwọ ntanetị gị mana ọwa ndị ọzọ.
Ndabere nke mkpebi a bụ na ị gaghị enwe ike iji ọrụ ọhụrụ nke usoro KFX Amazon, usoro nke gụnyere ohere nke akwukwo Bookerly, uzo ozo di uku, arụmọrụ ka mma, wdg ... Ma ọ dịkarịa ala, ị nweghị ike ruo ugbu a. A Caliber Mmepụta wepụtara ngwa mgbakwunye na akpọrọ ya KFX Ntugharị Nsonaazụ, ngwa mgbakwunye nke ga - enyere anyị aka ịgbanwe ebook ọ bụla na usoro Amazon ọhụrụ. Ngwaọrụ a bụ n'efu ma enwere ike iji ya ọtụtụ oge ịchọrọ achọrọ ihe ngwa mgbakwunye ahụ chọrọ.
Ntughari KFX bụ mmalite nke ntụgharị nke usoro a
Otu n'ime ihe ndị a chọrọ bụ iji Onye na-enyocha ihe atụ 3, a free Amazon ngwa na nke anyị ga-achọ ịdenye aha na otu akaụntụ ahụ nke anyị ji gbakwunye ngwa mgbakwunye na Caliber. Mgbe etinyere mmepụta KFX Ntugharị, ntụgharị dị mfe:
Nke mbu anyi ghari itughari ederede na Epub.
Mgbe ahụ anyị gbanwere usoro Epub na usoro KDF.
N’ikpeazụ anyị gafere usoro KDF na KFX.
O di nwute na anyi enweghi ike ime otu ihe ahu, ya bu, Anyị agaghị enwe ike iji ntụgharị KFX iji tọghata ebook na usoro KFX na usoro Epub. Agbanyeghị, ngwa mgbakwunye a pụtara nnukwu ọganihu maka mmepe ngwa mgbakwunye na-agbanwe usoro abụọ ahụ etu esi eme ya ugbu a na usoro Epub.
Akwụkwọ ọhụrụ na ochie ochie, bụ nke m kwesịrị ịzụta?
Enwere ike ịchọta ngwa mgbakwunye Ntugharị KFX na njikọ a, enwere ike ibudata ihe omume Amazon Kindle Previewer 3 ebe a na na Ekwentị mkpanaaka na anyị nwere ike ịchọta ndu zuru oke iji mee ihe. Bịanụ, ugbu a enweghị mgbaghara iji nwee ike inweta ebook na usoro KFX na-enweghị ịzụta ha na Amazon Not cheghị?
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Inddị usoro, egbula oge tinye njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » software » caliber » Ntughari KFX, ihe mgbakwunye Caliber maka Kindle
Ọ naghị arụ ọrụ. Mgbe edere ederede, ihe kacha nta a ga-ajụ bụ na onye dere akwụkwọ gosipụtara ihe ọ na-ekwu na mbụ. Site n'iji nlezianya na-agbaso usoro niile, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe na usoro KFX na caliber, mana enweghị ike ịfefe ya na ngwaọrụ ọkụ. Na nhọrọ ịnyefe na usoro a kapịrị ọnụ, usoro KFX apụtaghị.
EReader dị mma 13.3 bụ onye nwetagoro ego, na-eju onye ọ bụla anya
Goodereader weputara 13-inch nke eReader